Ndị na - emepụta Slitting Machine - China na-enye ndị na - eke Slitting Machine & Factory
Igwe ngbanye akwa ọsọ ọsọ nke 2m-6m
Ngwa igwe ngbanye ọsọ dị elu na-esite na sistemu na-ewepụ, ihe na-egbuji, igwe na-efegharị, onye ọ bụla na-arụ ọrụ na njikwa esemokwu na-emegharị njikwa na nchọpụta ihe. Workingkpụrụ na-arụ ọrụ dị ka ndị a: akụrụngwa ihe nkiri metallized ngwa ọrụ ndị ewepụtara na sistemụ ịbanye na-abanye usoro a na-egbu site na roller na-enwu, esemokwu ike, na-eme ka roller na usoro ịgbazigharị. Mgbe etinyere akụrụngwa ahụ, usoro ntinyeghachi ga-agbagharị t ...
Igwe ngbanye ọsọ ọsọ nke 2m-6m
Igwe ngbanye ọkụ dị elu iji gboo mkpa dị n'ahịa, anyị ewulitela ụdị slitters a. Igwe ngbanye akwa na-agba ọsọ nwere ike igbutu ihe eji ebu ihe ruru mita 2 ruo 6 mita, dịka BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC na ndị ọzọ. Njirimara igwe a na adota Siemens servo moto na onye na-ahụ maka ngagharị Siemens iji nye njikwa esemokwu kwụsiri ike, sistemụ arụmọrụ ntanetị dị mma, enwere ike ijikọ na ofntanetị nke Ihe maka njikwa anya dabere na isi njikwa ...
Ihe eji egbu osisi
Igwe ngbanye ọkụ dị elu iji gboo mkpa dị n'ahịa, anyị ewulitela ụdị slitters a. Igwe ngbanye akwa na-agba ọsọ nwere ike igbutu ihe eji ebu ihe ruru mita 2 ruo 6 mita, dịka BOPP / CPP / OPP / PET / PE / PVC na ndị ọzọ. Njirimara igwe: Ghota Siemens servo moto na onye na-ahụ maka ngagharị Siemens iji nye njikwa esemokwu kwụsiri ike, sistemụ arụmọrụ ntanetị dị mma, enwere ike ijikọ na ofntanetị nke Ihe maka njikwa anya dabere na isi njikwa ...